दिल्ली विधानसभा चुनाव : भाजपाले अग्रता बढायाे, काे अघि, काे पछि ? | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
Home समाचार अन्तर्राष्ट्रिय दिल्ली विधानसभा चुनाव : भाजपाले अग्रता बढायाे, काे अघि, काे पछि ?
on: २०७६ माघ २८, मंगलवार १२:२९ In: अन्तर्राष्ट्रिय, राजनीति, समाचार
माघ २८ काठमाण्डौ ,
गएको शनिबार भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विधानसभा चुनावको अहिले मतगणना भइरहेको छ । दिल्ली विधानसभा चुनावमा सत्तारुढ आम आदमी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच निकै कडा टक्कर हुने देखिएको छ ।
सुरुवाती मतगणना चलिरहँदा याे समाचार तयार पार्दासम्म कुल ७० सिटमध्ये आम आदमी पार्टीले ३९ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ भने भाजपा १९ सिटमा अघि देखिएको छ । दिल्ली विधानसभा चुनाव यो वर्षको पहिलो चुनाव हो । एग्जिट पोल्सले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याउने देखाएको छ ।
दिल्ली विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले सुरुवाती मतगणनामा अग्रता लिइरहेको छ । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले पनि सन् २०१५ को तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । मतगणना चलिरहँदा केही हाई प्रोफाइल उम्मेदवारमाथि सबैको ध्यान गइरहेको छ ।
आम आदमी पार्टीका सौरभ भारद्वाज ग्रेट कैलाश विधानसभा सिटबाट भारतीय जनता पार्टीकी शिखा रायभन्दा अघि छन् । अरविन्द केजरीवाल नयाँ दिल्ली विधानसभा सिटबाट भारतीय जनता पार्टीका सुनील कुमार यादवभन्दा अघि छन् ।केजरीवाल प्रतिद्वन्द्वी सुनील यादवभन्दा चार हजार मतले अगाडि रहेका छन् ।त्यस्तै राजिन्दर नगर सिटबाट आम आदमी पार्टीका राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टीका सरदार आर पी सिंहभन्दा धेरैले अघि छन् ।
कालका जीबाट आम आदमी पार्टीकी आतिशी भारतीय जनता पार्टीका धरमबीर सिंहभन्दा पछि रहेका छन् । बल्लीरामनबाट आम आदमी पार्टीका इमरान हुसैन भारतीय जनता पार्टीकी लताभन्दा पछि छन् । मटिया महलबाट आम आदमी पार्टीको टिकटमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका शोएश इकबाल काङग्रेसका मिर्जा जावेद अलीभन्दा अघि छन् । तिमारपुर विधानसभाबाट दिलीप पाण्डे, भारतीय जनता पार्टीका सुरिन्दर पाल सिहंभन्दा अघि छन् । दिल्लीमा अहिले आम आदमी पार्टीको सरकार छ । गएको विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले ६७ सिट जितेको थियो । भाजपा भने मात्र तीन सिटमा सीमित भएकाे थियाे ।
आर्मीकाे जित, उपाधि जित्ने सम्भावना कायमै
वडा सदस्य र इञ्जिनियर घुससहित पक्राउ